सरकारमा जान खुट्टो उचाल्दै महतो, के होला मधेस आन्दोलनको भविष्य ? « Pahilo News
सरकारमा जान खुट्टो उचाल्दै महतो, के होला मधेस आन्दोलनको भविष्य ?
प्रकाशित मिति : 30 July, 2016 11:28 am
साउन १५ । संविधान जारी पछि सबै भन्दा असन्तुष्ट दल सद्भावना पार्टीले सरकारमा जाने संकेत गरेको छ ।
संविधान जारी पछि मधेसी जनताको हितमा संविधान नआएको भन्दै सडकदेखि शहरसम्म संविधान जलाउँदै हिडेका मधेसवादी दल मध्ये सबै भन्दा उग्र अभिव्यक्ति दिने दल नै राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सद्भावना पार्टी थियो । अहिले त्यहि दल आन्दोलन नै छोडेर सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मधेवादी दलहरुको सत्तालिप्सा कतिसम्म रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आफैँ पराजित भएपछि समानुपातिक कोटाबाट श्रीमतीलाई सभासद् बनाएका महतो स्वयम्ले नै कांग्रेस–माओवादी केन्दको गठबन्धनमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुने बताएपछि अहिले त्यस दलको सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
महतोले खुलेरै कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि कांग्रेस–माओवादीले भने महतोको पार्टीलाई सरकारमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा अझै निर्णय लिएका छैनन् । तर, उक्त दलले भने प्रस्ताव आए जाने भन्दै खुट्टो उचालिरहेको छ । त्यति मात्र होइन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि सरकारमा जाने भन्दै खुट्टो उचाली रहेको छ ।
तर, उसले विजयकुमार गच्छदारलाई नलैजाने एक मात्र शर्त अघि सारेको बुझिएको छ । यदि ती दुबै दल सरकारमा गए भने आन्दोलन स्वतः तुहिने निश्चित छ । हुन त मधेसी मोर्चामा आवद्ध ती दुबै दलले मोर्चाले अघि सारेका ११ बुँदे मागबारे नयाँ सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, उनीहरुले ११ बुँदेलाई वार्गेनिङ टुल्स बनाएको बुझिएको छ ।
महतो र यादव दुबैले नेतृत्व गरेका दल सरकारमा गएको अवस्थामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले मात्र मधेस आन्दोलन धान्ने संभावना निकै कम छ ।
महतोले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच भएको ७ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले आशा जगाएको भन्दै केही लचक हुने संकेत गरेका छन् । ‘उहाँहरुको प्रतिबद्धता सकारात्मक छ, तर अब त्यही अनुसारको काम पनि हुनुपर्छ । यस विषयमा हामी उहाँहरुको व्यवहार हेर्न आँतुर छौँ, ।’ महतोको यो भनाइले पनि सरकारमा जान कति हतारोमा छने भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
उनले पनि गच्छदारलाई मधेस विरोधी नेता भएको भन्दै सरकारमा सहभागी नगराउन शर्त राखेका छन् ।